पहिलो बौद्ध प्रकोप - जीवन बिताउनबाट बचाउनुहोस्
पहिलो बौद्ध अनुमोदन
जीवन लिनदेखि बच्न
बौद्ध धर्मको पहिलो प्राथमिकता - मार नगर्नुहोस् - आजका ह्याटर मुद्दाहरूमा छुट्याउनुहोस्, वानज्याजमबाट गर्भपात र उत्थानमा। यस अनुमोदनको लागी एक नजर राखौं र कुन बौद्ध शिक्षकहरूले यसको बारेमा बताएका छन्।
पहिलो, आज्ञाहरू बारे - बौद्ध धर्मका अनुयायीहरू बौद्ध दस आज्ञाहरू होइनन्। तिनीहरू प्रशिक्षण पाङ्ग्राहरू जस्तै छन्। एक प्रबुद्ध प्रबुद्धलाई सधैं हरेक अवस्थामा सही प्रतिक्रिया दिइन्छ।
तर हामी ती व्यक्तिहरूका लागि प्रबुद्धताहरू पाएको छैनौं, यसका सिद्धान्तहरू एक प्रशिक्षण अनुशासन राख्दछौं जसले हामीलाई बुद्धको शिक्षालाई वास्तविक बनाउन सिक्न सहयोग गर्दछ।
पाली क्याननमा पहिलो प्रेमी
पालीमा, पहिलो अनुमोदन पनाटिपता वराममिक सखखापाम सममायमी छ ; "मैले जीवन बिताउन छोड्नको लागि मैले प्रशिक्षण नियम चलाएँ।" थोरडेन शिक्षक बख्बु बोधी अनुसार, पाना शब्द साँस गर्न वा कुनै पनि जीवित सास र चेतना छ भनेर बुझाउँछ। यसमा व्यक्तिहरू र सबै जानवर जीवहरू समावेश गर्दछ, जसमा कीरा सहित, तर बिरुवाको जीवन समावेश गर्दैन। शब्द atipata शब्द "तल बिस्तारै।" यसले हत्या गर्न वा नष्ट गर्न सन्दर्भ गर्दछ, तर यो पनि हिउँद वा अत्याचार गर्न सक्छ।
थेरेवडा बौद्धहरूले भनेका छन् कि पहिलो सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घनले पाँच कारकहरू समावेश गर्दछ। पहिलो, एक जीवित रहेको छ। दोस्रो, त्यहाँ अवधारणा हो कि जीवित हुनु हो।
तेस्रो, हत्याको विचारधारा त्यहाँ छ। चौथो, हत्या गरिएको छ। पाँचौं, मरिसकेको छ।
यो बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ कि मनमा उल्लङ्घनको उल्लङ्घन मनमा उत्पन्न हुन्छ, जीवित हुनुको पहिचान र हत्याको विवेक विचार। साथै, अरू कसैलाई आदेश दिने वास्तविक हत्याले यसको लागि जिम्मेवारी कम गर्दैन।
यसबाहेक, एक हत्या जो पूर्वनिर्मित गरिएको छ, उनीहरूलाई आत्मनिर्भर रूपमा हत्याको तुलनामा एक कर्तव्य अपराध हो।
महिनावारी ब्रह्मजाला सुत्र मा पहिलो प्रेमी
महायण ब्रह्जाला (ब्रह्मा नेट) सुत्रले यो व्याख्या गर्दछन्:
"बुद्धको एक शिष्य आफैलाई मार्न सक्दैन, अरुलाई प्रोत्साहन दिनु, घातक साधनहरू, प्रशंसा हत्या, प्रशंसा हत्यामा आनन्दित होस् वा उत्तेजना वा भित्री मन्त्रहरू मार्फत मार्नु पर्छ। उहाँले कारणहरू, नियमहरू, विधिहरू वा कर्म सिर्जना गर्नुपर्दैन। को हत्या, र जानबूझकर कुनै जीवित प्राणी को हत्या नहीं हुनेछ।
"बुद्धको शिष्यको रूपमा, उहाँले दया र फिलीय पद्धतिको दिमागलाई पोषण गर्नु पर्छ, सधैं मायालु साधनहरू सबैको उद्धार गर्न र सबैको रक्षा गर्न को लागी बनाउनुहुन्छ। बरु, उनी आफैलाई रोक्न र नम्रता बिना चिन्तित प्राणीलाई मार्ने असफल भए, उहाँले ठूलो अपराध गर्नुहुनेछ। "
आफ्नो पुस्तकमा उफाइट हुन: जेन मेडिकल र बोधिसट्टवा सल्लाहहरू , जेन शिक्षक शिक्षक र एन्डन्डसनले यस मार्गलाई यस्तो तरिकाले अनुवाद गरे: "यदि एक बुद्धको बच्चाले आफ्नै हातले मार्छ भने, व्यक्तिलाई मर्छ, मार्न मद्दत गर्दछ, हजुरआमालाई खुवाउनु, वा अभिशापको साथमा मार्न खोज्नु, यी कारणहरू, अवस्थाहरू, तरिकाहरू र हत्याका कार्यहरू हुन्। त्यसैले, कुनै पनि घटनामा एक जीवनको जीवन लिनु हुँदैन। "
बौद्ध अभ्यासमा पहिलो प्राथमिकता
जेन शिक्षक रबर्ट एटकनले उनको मन द माइन्ड अफ क्लोभरमा लेखे : जेन बौद्ध ईथिक्समा इन्सेज , "यस अभ्यासको धेरै व्यक्तिगत परीक्षणहरू छन्, कीराहरू र चूहोंसँग पूंजीमा सजाय गर्न।"
धर्मशास्त्रका एक प्रोफेसर कर्मा ल्सेसे शोमो र तिब्बती बौद्धिक परम्पराको एक ननले बताउँछ,
"बौद्ध धर्ममा कुनै नैतिक अव्यवहारहरू छैनन् र यसलाई मान्यता दिइन्छ कि नैतिक निर्णयले गर्दा कारणहरू र सर्तहरूको जटिल सम्बन्ध समावेश गर्दछ। ... जब नैतिक छनौट गर्ने, व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको प्रेरणाको जाँच गर्न सल्लाह दिएका छन् - चाहे विच्छेद, अनुलग्नक, अज्ञानता, बुद्धि, या दयालु - र बुद्धका शिक्षाहरूको प्रकाशमा आफ्नो कार्यहरूको नतिजाको वजन लिनुहोस्। "
बौद्ध र युद्ध
आज त्यहाँ 3000 भन्दा बढी बौद्धहरू अमेरिकामा सशस्त्र सेनामा सेवा गरिरहेका छन्, जसका साथै केही बौद्ध चैपलहरू पनि छन्।
बौद्ध धर्मले पूर्ण प्यासिफिज्म माग गर्दैन।
अर्कोतर्फ, हामी शंकास्पद हुनुपर्छ कि कुनै युद्ध "बस।" हो। रबर्ट एटकनले लेखे, "राष्ट्र-राज्यको सामूहिक अहंले व्यक्तिको रूपमा लोभ, घृणा र अज्ञानताको एउटै विषको विषय हो।" थप छलफलको लागि कृपया " युद्ध र बौद्ध धर्म " हेर्नुहोस्।
बौद्ध र शाकाहारीवाद
प्रायः बौद्ध धर्म संग शाकाहारीवाद संग मान्छे को सम्बद्ध। यद्यपि बौद्ध धर्मका प्रायजसो स्कूल शाकाहारीवादलाई प्रोत्साहन दिन्छन्, प्रायः यसलाई व्यक्तिगत रुचि मानिन्छ, आवश्यकता होइन।
यो तपाईंलाई आश्चर्य गर्न सक्छ कि ऐतिहासिक बुद्ध एक सख्त शाकाहारी थिएन। पहिलो भिक्षुले आफ्ना सबै भोजनलाई बिन्ती गरेर प्राप्त गरे, र बुद्धले आफ्ना भिक्षुहरूलाई मासु समेत दिईएको खानेकुरा खाने कोसिस गरे। तथापि, यदि एक भिक्षु को जान्दथे कि एक जनावर मा विशेष रूप देखि भिक्षुहरु लाई खिलाने को लागि हत्या गरिएको थियो, मासु को मना गर्न को लागी थियो। शाकाहारीवादमा र बुद्धका शिक्षाहरूमा अधिक " बौद्ध र शाकाहारीवाद " हेर्नुहोस्।
बौद्ध र गर्भपात
लगभग सधैं गर्भपात स्वीकार को उल्लङ्घन मानिन्छ। तथापि, बौद्ध धर्मले नैतिक नैतिक निरपेक्षताबाट बचाउँछ। एक समर्थक छनौट स्थिति जसले महिलाहरूलाई आफ्नै नैतिक निर्णय गर्न सक्षम बनाउँछ बौद्ध धर्मसँग असंगत छैन। थप स्पष्टीकरणको लागि, " बौद्ध र गर्भपात " हेर्नुहोस्।
बौद्ध धर्म र युथान्डा
सामान्यतया, बौद्ध धर्मले उत्थानको समर्थन गर्दैन। रङ एन्डरसनले भने, "'दयाको हत्या' अस्थायी रूपमा भोगाइको स्तर घटाउँदछ, तर यो प्रकाशको बारेमा आफ्नो आध्यात्मिक विकासमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ। यस्तो कार्यहरू साँचो दया होइन, तर म जुनसुकै अनुग्रहलाई कल गर्नेछु।
यद्यपि यदि एक व्यक्तिले हामीलाई आत्महत्या गर्न मद्दत पुर्याउछ भने, यसले यसले आध्यात्मिक विकासलाई बढावा दिँदैन भने, यसले हामीलाई सहयोग गर्न उपयुक्त हुनेछैन। अनि हामी मध्ये कुन व्यक्ति को यो हेर्न को लागी क्षमता छ कि वास्तव मा, एक व्यक्ति को महान कल्याण को लागी अनुकूल हुनेछ? "
के भने पीडा भनेको पशु हो? हामीमध्ये धेरै जनालाई एक जनालाई अनौठो बनाउन सल्लाह दिईएको छ वा शंकास्पद चोट लागेको छ, जनावरलाई पीडा दिइन्छ। जान्नुपर्छ "जान्नाले यसको दु: खबाट बाहिर" राख्नुपर्छ?
त्यहाँ कुनै पनि कठिन र छिटो नियम छैन। मैले एक प्रमुख जीन शिक्षक सुनेको छु भन्छु यो स्वार्थी हो कि व्यक्तिगत दु: ख को एक पीडा जनावर को दूर गर्न को लागी नहीं। मलाई पक्का छैन कि सबै शिक्षकहरूसँग सहमत हुनेछ। धेरै शिक्षकहरूले उनीहरूलाई जनावरको उत्थानमा मात्र विचार गर्नेछन् भने जनावर अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ, र यसलाई सुरक्षित गर्न वा यसको सतावटलाई कम गर्न कुनै उपाय छैन।
बौद्ध धर्म र महाकाव्य
डिनिनिस: लिबरेशनको महिला प्रतीकहरू
शुद्ध भूमि बौद्ध
कोन्ट अगस्टिन को थियो? - जीवनी प्रोफाइल
गुरु नानकको जन्मको कथा
आठ धर्मपाल: बौद्ध धर्म को संरक्षक
30 शाहीद सिंह राजपूत क्लान को शिरिर
अटलांटिक देखा डल्फिन
सर्वश्रेष्ठ डोनाल्ड ट्रम्प चुटकुले
क्याम्पबेल विश्वविद्यालय प्रवेश
मेम पछाडीका मानिसहरू: तिनीहरू अहिले कहाँ छन्?
धनुषा र धनुषा प्रेम संगतता
शीर्ष क्यालकुल्स संसाधन
पापीहरू भूतमा विश्वास गर्छन्?
यो फोटो एक सानो केटी भूत कब्जा गर्न सक्छ
महिलाहरुको लागि के अधिकारहरु मैरी Wollstonecraft वकील थियो?
सिल्ककोर्ड्स (बमब्यापी स्पस्प) - सिल्क बनाउने र सिल्ककोर्म्सको इतिहास
कसरी प्रफुल्दो पादरी बन्यो
तर्क के हो? कस्तो सोचाइ छ?
Dipole परिभाषा र उदाहरण
कसरी जस्टिन थॉमसले गोल्फको उकालो ताराहरू मध्ये एक जनालाई
ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली
कसरी Viennese Waltz नृत्य गर्नुहुन्छ?
Cómo retirar को लागि परिचित को लागि अनुमति दिनुहोस
हिन्दू र मेयन क्यालेन्डरमा स्वर्ण युग
क्यालो बीपी मतलब छ?
किन गोल्फर्स 'Fore Fore!' एरेन्ट शटहरूको लागि?
शाहदह: विश्वास को घोषणा: इस्लाम को स्तम्भ